Beelo ku dagaalamay deegaanka Ceel Afweyn oo heshiis Nabadeed ... | Universal Somali TV
Beelo ku dagaalamay deegaanka Ceel Afweyn oo heshiis Nabadeed Gaaray
Xisbiyada Mucaaradka ee Soomaaliland ayaa soo dhaweeyay soo afjarida xiisada ka taagneyd deegaanka ceel Afweyn ee gobolka Sanaag oo laba beelood oo walaalo ah ay xurgufi ku Dhaxmartay.
Mas,uuliyiin u hadlay xisbiyada Ucid iyo Wadani oo la hadlay Universal ayaa sheegay in ay aad ugu faraxsan yihiin xal ka gaarida shaqaaqada u dhaxeysay dadka walaalaha ee ku nool deegaanka Ceel Afweyn.
Afhayeenka xisbiga mucaaradka ah ee Ucid Barqad Jaamac Batuul iyo xoghayihii hore ee warfaafinta xisbiga Wadani Yuusuf Keysa Cabdulaahi oo magaalada Hargeysa ugu waramay Universal Tv ayaa sheegay in ay bogaadinayaan ka xisbi ahaan heshiiska Nabadeed.
Labada Xisbi ayaa aad ugu mahad celiyay dadaalada ay heshiiska u galeen boqor Cismaan Ow Maxamuud iyo Suldaan Saleebaan oo ka mid ah waxgaradka Soomaaliland kuwaasi oo door muuqda ka qaatay xalinta Xurguftaan.
Waxgaradka labada beel ayaa maalintii shalay ku dhawaaqay in la dhameeyay colaada waxayna ugu baaqeen bulshada in laga shaqeeyo walaalnimada Soomaaliland.
Mudo dhowr jeer ayaa shaqaaqo u dhaxeysa labada beel ee ku nool deegaanka ceel Afweyn ay horay u dhacday inkastoo waxgaradka deegaankaasi lagu amaanay xalinta qilaafka labada Dhinac.
Kan-xigaWasiirka Amniga oo Dhagax-dhigay dhis...
Kan-horeNin Mindi watay oo weerar ku qaaday d...
55,186,639 unique visits